ယနေ့ မွေးနေ့ရှင်ရွာသူမလေးအတွက်လက်ဆောင်????????????????????????? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ယနေ့ မွေးနေ့ရှင်ရွာသူမလေးအတွက်လက်ဆောင်?????????????????????????
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 18, 2012 in Local Guides, My Dear Diary, Photography | 51 comments
1 GOLD rays of sun in the morening
ေ ရွှ ရောင်နဲ့ဆင်တူတဲ့အလင်းတန်းတွေဖြာနေတဲ့နံနက်ခင်းပုံလေးကို မထင်မှတ်ဘဲရခဲ့ပါဘတယ်။
2 ကြည်လင်သောနေ့တစ်နေ့က မန်းလေးကျုံးရေပြင်နဲ့နန်းတော်
ကြည် လင်နေတဲ့ ကောင်းကင် ပြာလွင်တဲ့တိမ်တိုက် နောက်ခံနဲ့မန်းလေးကျုံးနဲ့မြို့ရိုးပုံလေးက တော့မနေ့မနက်ကရပါတယ်.
ဒီပုံလေးတွေကို နက်ဖြန်မွေးနေ့ရှင်အတွက် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
KYI lin thaw yay pyin ka tain ah yate
ဆရာပေါက်ရေ ရွှေကြည် လို့ထင်ပါတယ်….
ကဲ ကဲ ယနေ့ မွေးနေ့မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွင်သောမွေးနေ့ပေါင်းများစွာ
ကိုရင်မောင် ပြောတာ ဟုတ်တယ် ..
မရွှေကြည် ဘာဘဲ ..
ယနေ့မှစ နှစ်များစွာတိုင်အောင် အောင်မြင်တဲ့ခရီးကို
ပီးဒေါ့ .. အပျိုကြီးဘဝကလည်း အမြန်ဆုံး ကျွတ်ပါစေလို့ .. အဟိ ..
အပျိုကြီးမှန်းတော့ ကျနော်လဲ မသိတတ်……………………..
မရွှေကြည် ..၊ အပျိုကြီး …
အသက် ၂၈ နှစ်ပါလို့ ..
ကျနော် ရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ “ဂေဇက် မန်ဘာများစာရင်း” မှာ ပြောခဲ့ဖူးတယ်ဗျ ..
ဟယ်……… (အားရဝမ်းသာ အမောဒကောပြေးလာသံ)
မရွှေကြည်၏ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊
Happy Birthday ပါလို့။
Happy Birthday ပါ ညီမလေးရွှေကြည်။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ အမတွေကိုလည်း မုန့်အများကြီးကျွေးနိုင်ပါစေ။
မရွှေကြည်လေးရဲ့ ယနေ့ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းပြီး ဘ၀တလျှောက် ချမ်းမြေ့သာယာခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံလို့ ရွှေ အဆင်းလို ကြည် လင်ဝင်းလက် နိုင်ပါစေ။
ရွှေကြည့်ကိုယ်စား ကိုကိုကြောင်ကြီးမှ သတိတရ ပို့စ်တင်ပေးသူ ဦးပေါက်နှင့်တကွ နှုတ်ခွန်းဆက်သူ ရွာသူားအားလုံးကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါဂျောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ကျနော် ကျမတို့၏ မင်္ဂလာ…. အဲဒါတော့ သူ့သာမေးကြည့် ဂျပါတော့ဗျာ။
‘” ယနေ့မှ နောက်၂နှစ်အတွင်း(၂နောက် သုံညမဖြည့်ရ) အပျိုကြီးစာရင်းကိုပယ်ဖြတ်နိုင်သည်ဖြစ်သမို့ ရွှေကြည်ရတနာ ချိန်ခါ မကျော်ခင် (မိဘတို့ ၀တ္တရားရှိသည့်အတိုင်း)
မြို့တော်ဝန်ကို အကြောင်းကြား ကရ၀ိတ်ကိုလဲငှားပြီးလျှင် ပိတ်ဖဲပိုးဂတီဘာနဲ့ ရွှေပွဲလာ ပရိတ်သတ်ရွာသားတွေကို ဖိတ်ဖတ်ကာ တ၀ကျွေး ပရိတ်သတ်ရေ…. မွေးနေ့ပွဲလော… ဘာပွဲလော… ရွှေကြည်ဖြစ်ချင်သော ပွဲလေးကို ဖြစ်ပါစေသတည်း (နတ်ပွဲမပါ)…. ”
အဲဒီလိုမြင်ချင်ပါ၏… ၀ါကြောတွေ့ချင်ပါ၏လို့ တိုက်တွန်း…..လျှက်……
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မရွှေကြည်ရေ ။
ဒီနှစ်မွေးနေ့သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ၊ မိသားစုနဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့နေ့ရက်များကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော် ။
birthday wish လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ … ။ ဓါတ်ပုံတွေ က .. တဖြည်းဖြည်း ပိုပိုမိုက်လာတယ် ….. ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ကို လန်းဆန်းလာသလိုခံစားရတယ် …. ။
မမshwe kyi ပေါ်မလာသေးဘူးဗျ။ကိုရင်မောင် ရသွားပြီပေါ့။
မရွှေကြည်လာပါပြီရှင်။ ရွာသူားဦးဦး၊ကိုကို၊မမ၊သူငယ်ချင်း အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။
လှပတဲ့ရှုခင်းလေးတွေကိုချစ်မြတ်နိုးသူမို့ အရမ်းကိုကျေနပ်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
အသက် 28 ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့
အယ် 28 နှစ်ကို အပျိုကြီး တဲ့ … မီးတို့ အရွယ်ဆို ဘယ်နှယ့်ခေါ်ကြပါ့မလဲ ..
” happy birthday ” ပါ ညီမရေ …
Many many Thanks Laypai & Mayjuly.
စိတ်ချမ်းသာဖို့ ဆိုတာ လောကမှာအခက်ခဲဆုံးပါ…ဒီတော့ မရွှေကြည်ရဲ့မွေးနေ့ ကစလို့ ..သက်ဆုံးတိုင်ထိ စိတ်ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း….Happy Birthday ပါ…..
ပင်လယ် + KhaingKhaing
1+8 + 8 +2+0+ 1 +2= 22
=2+2=4ဆိုတော့ လေး ဂဏန်း ပိုင်ရှင်ပဲဗျ ! ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့ မွေးနေ့ ခုနှစ် လရက် အားလုံးပေါင်းရင်လည်း ( ၂၂ ) ရတာမို့ လေးဂဏန်းပဲဗျ ! လေးဂဏန်း ပိုင်ရှင်များ အတွက် စာအုပ် တအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားတာ ရန်ကုန် က အာရုံသစ် စာပေ မှာ တရက် တွေခဲ့ဘူးတယ်ဗျ ! အကုန်လုံး ပြီးအောင် မဖတ်ခဲ့ ဖြစ်ပေမဲ့ တော်တော်များများတော့ အမြည်းသဘောမျိုး ရပ်ပြီး ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ နောက်မှ ဝယ်မယ်လို့ တွေးထားတာ မဝယ် ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ စိတ်ထား ထူးခြား မြင့်မြတ် ထူးချွန် ထက်မြက်တဲ့ ဂဘာကျော် ခေါင်းဆောင်ကြီး တွေ များတယ်ဗျ ! မရွှေကြည် ရဲ့ နှစ်ဆယ့်ရှစ် နှစ် ပြည့် မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ နေထိုင်ဖြတ်သန်းရင်း ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေ အများကြီး လုပ်နိုင်ပါစေဗျာ !
စံဇာဏီ ဗိုလ် ရဲရင့်
စံဇာဏီဗိုလ်ရဲရင့် ဆိုပါဂလား ..
သူ့နာမည်ဂ နှစ်လုံးတောင်မှ အပိုပါဒါဆိုတော့
ပိုစွမ်းမယ့် သဘောထင်ရဲ့ ..
မမကြီး မရွှေကြည် .. အဟိ ..
အပေါ်မှာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပီနော် ..
စွံဖို့ဘဲ ကျန်ဒေါ့ဒယ် ..
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ….
အန်တီရွှေကြည် အတွက် ဒီနေ့ အူးပုတ်ထွက်လို့
မနက် အာဇံမပေးခင်ကတည်းက ဆမိုင်တွေ ပို့လိုက်ပါဘီ
ကိုယ်တိုင်လဲ အ၀စား သူများတွေလဲ ကျွေးလိုက်ပါ …….
ဗလာဒီမာ ဇာကရီယာ ရဲစည်
ကြိုက်မှကြိုက် ချစ်တူလေး ဗြဲစည် အဲလေမှားလို့ ရဲစည်ရေ။
ပင်လယ်ခိုင် အဲမှားပြန်ပြီ ကိုပင်လယ်ပျော်နဲ့ မခိုင်ခိုင် ကျေးဇူးပါ။
ကြောင်ဝတုတ်၊ သူရဇော်၊ မမရိုစ့်နှင့် အပေါင်းအပါများ
ရွှေကြည်ရေ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒေါင်ဒေါင်မည် ကျန်းမာခြင်းနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု အပေါင်းတွေ နဲ့ ဘ၀လမ်းမှာ ဆက်ပြီးလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
စားကောင်းတဲ့ မုန့်လေးတွေ ကျွေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်။ အဲဒီနေ့က တကယ် ပျော်ခဲ့ ပါတယ်။
ရွှေကြည်လည်းပျော်ပါတယ် မရို့စ်ရယ်။ ကျေးဇူးလဲတင်တယ်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားကအချိန်ပေးခဲ့လို့လေ။
တော်ပါဘီ တော်ကြာ ခေါ်ကြွေးနေမှာကြောက်ပါ၏။
အပျော်ရွှင်ဆုံးမွေးနေ့မှ အသက် ၁၂၀ ရှည်ပါစေ
မွေးနေ့ ကလေးက မထင်မှတ်ပဲ… အရမ်းပျော်စရာကောင်းသွားပါတယ်..ဗျာ.။
အခုပဲ… စားပြီး.သောက်ပြီး…လို့ရွာထဲ..၀င်လာလိုက်တာ..။
ရွှေကြည့် ကို…မွေးနေ့ လက်ဆောင်တွေ ပေးနေပြီ။
မင်္ဂလာကျက်သရေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ့ ရှင် ရွှေကြည် ထာဝရ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
One more year of life means one more year of an opportunity to help someone in need.
ဟဲ့ ရွှေကြည် ရွှေကြည်လေးရယ် …. ဒီတစ်မိုးကုန်ရင် xxxx ဘာဖြစ်ဆိုလား ? သိချင်ရင်တော့ အဆိုတော့ ဦးသုမောင်ကိုသာနှိုးပြီး ဆက်ဆိုခိုင်းပေရော့………။
သူများနှင့် မတူအောင် မန့်လိုက်သည်…။
Happy Birthday ပါ ရွှေကြည် ..
အပေါ်ကရွာသူားတွေ ပေးထားတဲ့ ဆုအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး
မြန်မြန်ကျွတ်ပါစခင်ည.. အပျိုးကြီးဘ၀က ပြောပါတယ်..
ချမ်းမြေ့သုခပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျာ..
Happy Birthday ပါ ရွှေကြည်
မွေးနေ့ မင်္ဂလာ နေ့ရက်မှ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်များစွာကို ဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
လိုအပ်သောဆု မြတ်သောဆု များလဲ ပြည့်ဝပါစေ။
မိဘ ကို စိတ်စေတနာ အပြည့်နဲ့ ကျေးဇူးပြန်ပြုနိုင်ပါစေ။
အဲဒီအတွက်လဲ မတောင့်မတ မကြောင့်မကျ အလုံးစုံကြွယ်ဝမှု ရရှိနေပါစေ။
အရီးပေးတဲ့ဆုတွေထဲမှာ မိဘကိုစိတ်စေတနာအပြည့်နဲ့ ကျေးဇူးပြန်ပြုနိုင်ပါစေ ဆိုတာအကြိုက်ဆုံး။ ကျေးဇူးပါ ချစ်ရတဲ့အရီးရေ
အော် 28 နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရှင်ဂိုး
အင်အား ပိုမိုတောင့်တင်းလာပြန်ပြီလို့ ဆိုရမှာပေါ့ အာဟိ……..
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးပါနော်။ ဂိုဏ်းအင်အားတောင့်တင်းလာပြီဆိုတော့
ကိုအံစာ၊ ဥဥ၊ ကိုခင်ခ၊ P Chogyi၊ Lynn Lynn၊ ချစ်မမ၊ မနိုဗွီ၊ အူးပေ၊ အူးကြောင်းကြီး၊ လေပြေရိုင်း၊
အိတုံ၊ ကိုနာဂရ၊ အူးကြီးမိုက်၊ ကြောင်ဝတုတ်၊ ကိုရင်ဆာမိ၊ အလင်းဆက်၊ the Best၊ ဦးဦးပါ၊ နေ၀န်းနီ၊ ကိုထူးဆန်း၊ ကိုရွာစားကျော်၊ ကိုသာ၊ ချစ်ရတဲ့အရီး။ အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့။
တကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မအားလပ်တဲ့ကြားကနေလာရောက်ပေးခဲ့ကြသူတွေ၊ ဆုံနိုင်အောင်
လေးပေါက်ရေ သမီးတကယ်ပျော်တယ်နော် သိလား။
ယောက်ျားမြတ်တယောက်ရဲ့/ကို. ဘ၀အဖေါ်မွန်ဖြစ်အောင်/ရအောင်.. လုပ်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါစေကွယ်..
၃၀အထိ.. လုံးဝ(လုံးဝ) မစောင့်စေလိုကြောင်း….
မအိတို့ကိုလဲ ဓါတ်ပုံတွေပို့ပေးလိုက်မယ် နက်ဖြန်ကြရင်ကြိုက်တာယူပေတော့
လေးပေါက် နော် မြှောက်မပေးနဲ့ မိရွှေကြည်ကစိတ်ကြီးတယ်ဗျ။
ကိုဘလက်ချောပြောသလို…….နှစ်တစ်ရာမကပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ခြင်းနဲ့ အတူ….
ရွှေကြည်လေးရဲ့ မွေးနေ့ မှာကိုပေါက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..
ပြီးတော့ ရွှေပဒုမ္မာဆိုင်လေးနဲ့ အပေါင်းအသင်း…သူငယ်ချင်းလေးများ(ရွာသူရွာသားများ)ကိုလည်း……..
ရေလိုအေးလို့ ပန်းလိုချမ်းမြေ့ပါစေ…………ူ
မထင်မှတ်ပဲ ရွာသူားတချို့ ဆုံခဲ့ကြတယ်နော် အမှတ်တရမွေးနေ့ပါပဲ။